बागमती प्रदेशको बजेटः चितवनका कुन क्षेत्र परे प्राथमिकतामा ? - Narayanionline.com Narayanionline.com बागमती प्रदेशको बजेटः चितवनका कुन क्षेत्र परे प्राथमिकतामा ? - Narayanionline.com
बागमती प्रदेशको बजेटः चितवनका कुन क्षेत्र परे प्राथमिकतामा ?
चितवन, असार १–
बागमती प्रदेश सरकारले चितवनका विभिन्न योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले आज प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
नारायणी लिफ्ट र खगेरी सिँचाइका लागि रु १५ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वी राप्ती सिँचाइ सबलीकरणका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।